Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. यस बर्ष पनि सिस्नुपानीको देउसी-भैलो (भिडियोसहित) – Emountain TV
यस बर्ष पनि सिस्नुपानीको देउसी-भैलो (भिडियोसहित)
काठमाडौं, २२ कात्तिक । हरेक साल नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सिस्नुपानी नेपालले देउसी भैलो खेल्ने गर्छ । यस वर्ष पनि सिस्नुपानीले देउसी भैलो खेलेको छ । वर्षभरी घटेका घटनालाई कलात्मक रुपमा देउसी र भैलोको माध्यमबाट प्रस्तुत गरिने हुनाले सिस्नो पानीको देउसीभैलो हेर्न प्रमुख राजनीतिक दलका नेता देखि उच्च पदस्थ अधिकारीहरु पुग्ने गर्छन ।
सिस्नुपानीको देउसी भैलो हेर्न नेकपाका नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, ईश्वर पोख्रेल, रामबहादुर थापा बादल, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, गगन थापासमेत प्रज्ञा प्रतिष्ठान पुगेका थिए ।
दुइ तिहाइको बलियो सरकार बनाएर पनि काम गर्न नसकेको भनेर आम मानिसले समेत गुनासो गरिरहेको बेलामा सिस्नुपानीले नेताहरुकै सामुन्ने कुरा बढी गर्ने तर काम चाहि नगर्ने भनेर खुव आलोचना गरयो ।
कलाकार जेवि टुहुरे अर्थात राजा राजेन्द्रले दुइ तिहाईको सरकार हुँदा पनि केहि गर्न नसकेको भनेर वर्तमान सरकारलाई गित मार्फत व्यग्य गरे । सिस्नुपानीले नेताहरुलाई पालैपालो देउसी भैलोको माध्यमबाट सरकारलाई सिस्नु र पानी लगायो । कार्यक्रममा कलाकार मनोज गजुरेल, सिताराम कट्टेल धुर्मुुस, तथा दमन रुपाखेतीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा प्रति कटाक्ष गरेका थिए ।